Soo dejisan Hola Launcher 2.0.5 – Vessoft
Soo dejisan Hola Launcher
Hola Launcher – launcher caan ah oo taageero ka qaababka badan oo waxtar leh. Software wuxuu kuu ogol yahay in ay doortaan iyo rakibi wallpapers asalka ah, noocyada casriga ah, astaanta HD, saamaynta boggan kala duwan iwm Hola Launcher taageertaa hawlaha si aad u nadiifiso xusuusta iyo dadajiso howlgal qalabka. Software ayaa si toos ah kooxaha codsiyada lagu rakibay by qaybood oo iyaga u qaybisay in ka fayl ku haboon. Hola Launcher ku jira a search engine dhisay-iyo nidaam u gaar ah widgets ee aad desktop. Sidoo kale software uu awood u leeyahay in ay ku taliyaan in user codsiyada xiiso leh Suuqa Play ah.
Isutagga Automatic ah codsiyada oo qaybo
Isbeddelka interface ka, si loo waafajiyo shuruudaha aad
Meel shaqo ka nadiifi
Hola Launcher Software la xiriira:
العربية, English, Français, Español... Clean Master 5.12.1